Izindaba - Siqinile isidingo sezimoto ezisebenza ngogesi, ukukhiqizwa kweChevrolet Bolt EV kuzonyuka ngo-20%
Isidingo sezimoto ezisebenza ngogesi siqinile, ukukhiqizwa kweChevrolet Bolt EV kuzonyuka ngo-20%
NgoJulayi 9, uGM uzokhuphula umkhiqizo wezimoto kagesi wakwaChevrolet Bolt ongu-20% ukuhlangabezana nezidingo zemakethe ezingaphezu kwezilindelekile. AbakwaGM bathi e-United States, Canada naseNingizimu Korea, ukuthengiswa komhlaba wonke kweBolt EV engxenyeni yokuqala yonyaka we-2018 kukhuphuke ngo-40% uma kuqhathaniswa nesikhathi esifanayo ngonyaka odlule.
Isikhulu seGM uMary Barra wathi enkulumweni yakhe ngoMashi wathi ukukhiqizwa kweBolt EV kungaqhubeka nokwanda. IChevrolet Bolt EV ikhiqizwa embonini yeLake Orion eMichigan, kanti ukuthengiswa kwayo ezimakethe bekusilela. UMary Barra uthe engqungqutheleni ebiseHouston, "Ngokuya ngesidingo esikhulayo somhlaba wonke seChevrolet Bolt EV, simemezele ukuthi sizokwengeza ukukhiqizwa kwamaBolt EVs ngasekupheleni konyaka."
IChevrolet Bolt EV
Engxenyeni yokuqala yonyaka, iBolt EV ithengise amayunithi angu-7 858 e-United States (iGM imemezele kuphela ukuthengisa kwikota yokuqala neyesibili), kanti ukuthengiswa kwezimoto kukhuphuke ngo-3.5% kusukela engxenyeni yokuqala yonyaka ka-2017. Kumele kuqashelwe ukuthi iBolt's Imbangi enkulu kulesi sigaba yiNissan Leaf. Ngokombiko wakwaNissan, inani lokuthengisa lemoto kagesi yeLEAF e-United States lalingu-6 659.
UKurt McNeil, iphini likamongameli webhizinisi lokuthengisa lakwaGM, uthe esitatimendeni, “Umphumela owengeziwe wanele ukuthola ukukhula kwezokuthengisa emhlabeni wonke kweBolt EV. Ukunweba uhlu lwayo emakethe yase-US kuzokwenza ukuthi umbono wethu wokukhishwa okungatheni emhlabeni ube yisinyathelo esiseduze. ”
Ngaphezu kokuthengisa nokuqashisa abathengi ngqo, iChevrolet Bolt EV nayo iguqulwe yaba yimoto eyiCruise Automation. Kumele kuqashelwe ukuthi iGM ithole iCruise Automation ngo-2016.